Izinyathelo Ezi-10 Zokwakha Isu Elingcono le-B2B le-Twitter | Martech Zone
Izinyathelo Ezi-10 Zokwakha Isu Elingcono le-B2B le-Twitter
ULwesihlanu, July 8, 2011 ULwesihlanu, July 8, 2011 Douglas Karr
Ngisanda kufunda ukuthi i-Twitter isenabasebenzisi abaphindwe kabili kune-LinkedIn. Ngobuningi bezinhlelo zokusebenza ze-Twitter nokuhlanganiswa, kalula lapho ama-tweets akhuliswa nakho kukhulu kakhulu. Njengomsebenzisi we-B2B we-Twitter uqobo, ngihlala ngisebenza isu lami le-Twitter ukuqhubeka nokwakha okulandelayo nokuheha izethameli ezifanele kakhulu. Nawa amanye amasu engiwasebenzisayo:
Khomba izethameli eziqondiwe ukulandela. Ngifeza lezi zindlela ezimbili ezihlukene… okokuqala ngokusesha idatha yephrofayili yamagama abalulekile ahambisana nezithameli zami bese kuthi okwesibili, ngokulandela abalandeli balabo abasembonini efanayo engikuyo. Zombili lezi zinqubo zilula ngokusebenzisa amathuluzi afana TweetAdder. Eqinisweni, angikalitholi ithuluzi elingcono lawo! (Yebo, leso isixhumanisi sokusebenzisana).
Esikhundleni sokuphonsa imibuzo ejwayelekile kubalandeli bami, mina buza imibuzo eqondile kubantu engifuna ukulandela noma ngifuna ukwakha ubudlelwano nabo. Amanye ama-akhawunti akuzona izilaleli zami, kepha anegunya embonini ngakho-ke ngiyazibandakanya. Uma ngifanelekile, bazokhuluma nami futhi bangiphakamise… lokho kunika igunya futhi kwakha abalandeli bami.
Ngisebenzisa ukuqapha ezokuxhum ukukhomba amathuba okusiza abanye. Uma usiza abanye, kuvame ukuholela ekwakheni ubudlelwane bebhizinisi okungagcina kuholele ekuzibandakanyeni kwemali. Ungacabangi ngakho ukusiza umuntu mahhala… Ngokusiza abanye esidlangalaleni emkhakheni wakho wobungoti, umhlaba ukubhekile ukuthi usize abanye. Njengoba bekubona usiza, bazokhumbula… futhi bazokushayela lapho bedinga usizo.
Ngisebenzisa Izicelo ze-Twitter ukusiza ukuphatha ukusesha, ukulandela, ukuthumela i-tweet, nokunciphisa izixhumanisi. I-Twitter.com, isiza, siyesabeka ngalokhu. Kepha izinhlelo ezifana ne-TweetDeck, Seesmic kanye ne- I-Hootsuite kumnandi. Ziyakuvumela ukuthi uphathe izingxoxo kahle kakhulu.
I khokha ukukhuthaza iphrofayili yami kumasayithi afana I-TwitterCounter. Kunoku ukuthenga abalandeli.
Ngivame ukuzibandakanya ingxoxo eyimpikiswano futhi ngenhlonipho mpikiswano yami. Wonke umuntu uthanda impikiswano enhle… ikakhulukazi esihlokweni esithinta inhliziyo impela. Esikhundleni sokukhathazeka ngokukhubekisa abantu, ngikubheka njengokuhlunga labo bantu okungenzeka angifuni ukwenza ibhizinisi noma kunjalo! Ungesabi ukugxumela kokungavumelani, kwenze nje ngenhlonipho (noma ngabe kubi kangakanani).
I phakamisa… wonke umuntu. Ngisho nokuncintisana kwamakhasimende ami nokuncintisana kwami ​​uqobo kuthola ukunakwa kimi. Iqiniso ukuthi banikeza izeluleko nolwazi olumangalisayo olusebenza kuzithameli zami. Ngokwabelana ngalolo lwazi nezithameli zami, ngandisa inani le-Tweeting yami nabalandeli bami… akusoze kwaba yinto embi.
Ngiyazama ungalokothi ukhulume ngami. Akekho onendaba nawe nokuthi wenzani. Banendaba nenani oliletha kubo. Uma ngingaxhunyiwe ku-inthanethi isikhashana, ngingatshela abantu ukuthi kungani. Uma ngiya emcimbini ongahle uthandwe, ngingawuthumela ku-tweet… kepha lokho kwenzelwa ukuthi ngihlangane nabalandeli bami. Ngizothembeka ukuthi ngibaxosha ngokushesha abantu abamemezela lokho abebenakho ngesidlo sasekuseni, njll. Akekho onendaba… ikakhulukazi abantu abafuna ukwakha inethiwekhi yebhizinisi ebalulekile online. Lokho kubheda kungenxa ye-Facebook. 🙂
Ngisebenzisa ama-hashtag ngangokunokwenzeka. Kusetshenziswa ama-hashtag ngempumelelo abanye abakufunayo kungakha inani labantu abathola okuqukethwe kwakho futhi bakhe okulandelayo. Ungabukeli phansi amandla wesibonakaliso #!
Uma ngingenakho okuhle ukuTwitter, mina twut the heck up! Kwesinye isikhathi kuzodlula usuku noma ezimbili ngaphandle kwe-tweet efanelekile kimi. Ngikulungele lokho… into yokugcina engifuna ukuyenza ukugcwalisa imifudlana yabalandeli bami ngokuqukethwe okungenamsebenzi!
Uma ungumnikazi webhizinisi, uyaqonda ukuthi ukulinda ucingo lukhale mhlawumbe kuyindlela esheshayo yokuqothuka. Uma ufuna ukuba sengxoxweni, udinga ukuthi usebenze ngokushayela, ukuphendula, ukuhola, nokuhlanganyela engxoxweni eyenzeka manje.
Amabhizinisi akuTwitter. Amabhizinisi acwaninga wena nabancintisana nabo. Amabhizinisi afuna isisombululo. Uma ungekho ukuzobasiza, ungalindeli ukuthi bazokufuna. Udinga ukuba phambi kwabo njalo… nezimpendulo ezifanele ngesikhathi esifanele.
I-Fortune 100 ne-Social Media
Faka ingemuva langokwezifiso ku-WordPress 3
Jul 9, 2011 ku-1: 37 AM
yini othanda ukuyisebenzisa ukuqapha izixhumanisi owabelana ngamaTweets, noma wena?
Jul 9, 2011 ku-2: 18 AM
Ngisebenzisa iHootsuite noma iBit.ly ukuxhumanisa. Uma kungokomkhankaso wangempela, ngizobeka ikhodi yokulandela umkhankaso kuwo ukuze ngibone ukuvakashelwa ku-Analytics.
Jul 10, 2011 ngo-5: 44 PM
Kimina i-B2B ku-twitter imayelana nokwakha ubudlelwano 🙂
Jul 11, 2011 ngo-3: 56 PM
Izinto ezinhle, Doug. I-Twitter futhi iyindawo enhle yokubuka ama-egos amaningi azilungiselela. Nginecala njengomuntu olandelayo uma kukhulunywa ngokubukisa ngesibindi esincane se-Twitter. Njengoba kuncane okungokoqobo, okuqukethwe okusha okwabiwa ekuqaleni ku-Twitter, kunalokho sibona ulwandle lwama-retweets, iningi likhomba kwimithombo efanayo yokuqala. Kukhona, noma kunjalo, izindlela ezimbalwa lokhu kuba wusizo. Umuntu angathola umuzwa wokuthi isenzo sokubhala kabusha iwindi lethuba lokuqonda kangcono imicabango yomuntu. Ungayisebenzisa futhi ngamandla amakhulu ekuhlaziyweni okuhamba phambili. Futhi njengoba wazi, kunezinhlelo zokusebenza laphaya ezingasiza ukuzenza zombili lezi ngempumelelo. Kimina, noma kunjalo, i-Twitter iyindawo yokuqala enhle yokuba nengxoxo nokugcina okunengqondo nabantu. Futhi lokhu ngizwa lapho inani langempela lidlala khona. Njengesibonelo, lapho uhlanganyela ezingxoxweni ku-Twitter, ngeke ngimangale ukuzibona zelulekwa kubhulogi yakho yezinkampani, ekhasini lakho le-Facebook, kubantu abangena kwi-Blog Talk Radio. Ngibona izinhlangano eziningi manje sezicabanga nge-Twitter njengesinye futhi isiteshi sokumaketha, lapho zingakaqedi ngisho nokufunda zize zisisebenzise ukuxoxa namakhasimende abo kuphela. Fakaza ushintsho lwamanje oluya kumantra ye-ROI futhi awukwazi ukuzibamba kodwa ucabange ukuthi izinkampani eziningi namanje azikutholi. Kuyafana nokwake kwaba njalo.
May 10, 2012 ku-2: 09 PM
"Ngibuza imibuzo eqondile kubantu engifuna ukubalandela noma engifuna ukwakha ubudlelwano nabo". Uhlobo luni lwemibuzo oyibuzayo?
May 17, 2012 ku-7: 19 PM
@ google-aa522cbe3de1ac803a0cf795b19e8a3a: disqus, engikushoyo ngalokho ukuthi ngizinike isikhathi sokubheka amaphrofayili namasayithi abo ukuthola imibuzo emihle ekhombisa ukuthi ngiwenzile ngempela umsebenzi wami wesikole. Ku-Twitter, ngihlala ngibona abantu beziphendulela ngezinto ezifana nokuthi “Ngitshele ukuthi ufunda yiphi incwadi”…. futhi ngiyazi ukuthi abanaso nesisodwa isasasa kulokhu engikufundayo. Esikhundleni salokho, ngithanda ukufunda kancane ngabo futhi ngibabuze umbuzo abangawuphendula kuphela.
Isibonelo - ngibonile ukuthi usebenza nenkampani ye-ecommerce futhi kubonakala sengathi usebenza neMagento? Sinamakhasimende ambalwa asebenzisa iMagento futhi avame ukubheka izinsiza ngezikhathi ezithile ukusiza - ingabe yilolo hlobo lomsebenzi ongalwenza?
Feb 14, 2013 ngo-5: 11 PM